फ्रन्टलाइनरमा संक्रमण बढ्दो, स्वाथ्य मन्त्रालय भन्छ: आफैं सचेत हुनुपर्छ - Himal Dainik
फ्रन्टलाइनरमा संक्रमण बढ्दो, स्वाथ्य मन्त्रालय भन्छ: आफैं सचेत हुनुपर्छ
काठमाडौं २० श्रावण २०७७, मंगलवार १८:२८
पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट ‘फ्रन्टलाइन’ मा खटिने जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित भएका छन्। केहीमा भाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने केहीले जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तथ्यांक सरकारले यकिन गरेको छैन । तर, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको संख्या भने एकिन छ । सोमबार साँझसम्मको तथ्यांक अनुसार सुरक्षा निकायका तीन संगठनका ५ सय १ जनामा संक्रमण देखिएको छ । मंगलबार आएको रिपोर्ट अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत १४ सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । यो सँगै संक्रमण हुने सुरक्षाकर्मीको संख्या ५ सय १५ पुगेको हो। दुई दिन अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पीसीआर परीक्षणका लागि लिइएको स्वाबमा १५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको र ती मध्ये १४ जना सुरक्षाकर्मी रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सडकमा परिचालित ट्राफिक, सिमानामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित नेपाली सेनाका ब्यारेकमा समेत संक्रमण फैलिएपछि सुरक्षा संगठनको काम नै प्रभावित हुन थालेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका ७२ सहित मुलुकभर नेपाल प्रहरीका २ सय ६७, सशत्र प्रहरी बलका १ सय ३१ र नेपाली सेनाका १ सय ३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
बग्गीखानामा रहेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा कार्यरत दुई ट्राफिक प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि आइतबारदेखि त्यहाँबाट हुने अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको छ । महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालसहितका ३ सय ७५ जना प्रहरीका अधिकृत र जवान क्वारेन्टाइनमा रहेका महाशाखाले जनाएको छ । उपत्यकाभित्र रहेका १ हजार ५ सय ४५ ट्राफिक प्रहरीमध्य यती प्रहरी क्वारेन्टाइनमा भएपछि उपत्यकाको सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न खटिएका ट्राफिक प्रहरीको संख्या कम देखिएको छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका तथ्यांक अधिकृत कृष्ण पाण्डेका अनुसार अहिलेसम्म करीव २ सय ५० स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण देखिनेमा स्वाब संकलन गर्न जाने र संक्रमितको उपचार गर्ने धरै रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
कर्मचारी त कतिमा कोरोना संक्रमण देखियो भन्ने एकिन छैन । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले सकभर समूहमै स्वाब दिने र सबैभन्दा बढी ‘फ्रन्टलाइन’ मा उभिनुपर्ने भएकाले पेशा नै उल्लेख गर्ने भएकाले थाहा हुने तर, अन्य कर्मचारीको हकमा ठेगाना मात्रै लेखे पुग्ने भएकाले कति कर्मचारीमा संक्रमण भयो तथ्यांक नहुने स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांक शाखाले जनाएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुको आफैं राख्ने र सुरक्षाकर्मीको सम्बन्धित सुरक्षा निकायमा तथ्यांक पठाइने विभागले जनाएको छ ।
‘फ्रन्टलाइन’ मा काम गर्नेहरु प्रायः नागरिकहरुसँगको सम्पर्कमा रहनुपर्ने तर, सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामान प्रयाप्त नभएकाले संक्रमण देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रदीप यादव, विरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै प्रदेश १ का प्रमुख न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले सडक प्रदर्शनमा सहभागीलाई नियन्त्रणमा लिँदा, विभिन्न स्थानमा सड्कमा यातायातका साधन व्यवस्थापन गर्दा, संक्रमण देखिएका र आशंकामा स्वास्थ्य उपचारका लागि आउनेलाई व्यवस्थापन गर्दा अधिकृत र जवानलाई संक्रमण भएको हुनसक्ने बताए। भिभिआइपी र भिआइपीको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। केही समय अगाढि पूर्व गृहमन्त्री भिम रावलका पिएसओमा संक्रमण देखिएको थियो।
संक्रमण देखिने क्रम बढेपछि प्रहरीले अहिले पक्राउ वा हिरासतमा लिँदा नयाँ सुरक्षा मापदण्ड बनाएको प्रवक्ता कडायतले बताए । ‘सकभर नजिकमा नपुग्ने र सुरक्षा सावधानी अनिवार्य रुपमा अपनाउने गरी पक्राउ वा हिरासतमा लिने मापदण्ड बनाएका छौ। कार्यालयहरु निर्मलीकरण गरिएका छन्,’ प्रवक्ता कडायतले भने, ‘प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयमा एक विभागबाट अर्को विभागमा अनावश्यक रुपमा नजाने र थोरै जनशक्तिबाट काम चलाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, त्यति हुँदा पनि हरेक दिन समूहमा खटिने जनशक्ति भएकाले एकबाट सिंगो टोलीमा र प्रहरीबाट नागरिकमा फैलिने खतरा उत्तिकै छ ।
ब्यारेकमा बस्ने सैनिकमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म नेपाली सेनामा १ सय ३ जनामा कोरोना देखिएको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ। संक्रमण देखिने धेरैजसो विदेशबाट आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, शव व्यवस्थापन गर्ने र आइसोलेसन सेन्टरमा खटिने सैनिक अधिकृत र जवान भएको मुख्यालयको भनाइ छ ।
त्यस्तै सिमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीमा प्रहरीमा पनि संक्रमण देखिएको छ । सोमबार साँझसम्म सशस्त्र प्रहरी बलका एक सय ३१ जना संक्रमित भएका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले बताए। सीमा नाकामा जबरजस्ती प्रवेश रोक्न खटिएका, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा खटिएकाका संक्रमण देखिएको उनले बताए । ‘अहिले कोभिडका कारण सबै नाका सिल गरिएको छ । नाका हेर्ने जिम्मा सशस्त्रको छ । जवरजस्ती बस्न खोज्नेलाई रोक्न खोज्दा नजिकमा आएर झडप हुने स्थिति पनि बन्यो, त्यो रोक्ने जवानहरुमा संक्रमण बढेका देखिएको छ।
क्वारेन्टाइनको सुरक्षार्थ खटिएकाबाट पनि संक्रमण बढेको छ । आपराधिक प्रकृत्तिका र गैह्रकानुनी मान्छे प्रवेश गर्न खोज्छन् । रोक्न खोज्दा संक्रमण भएको हुनसक्छ,’ प्रवक्ता डिआइजी अर्यालले भने ।
जनस्वास्थयबिदहरु फ्रन्टलाइनमा खटिनेहरुलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध नगराइदा र गराइएपनि उनीहरुलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नसिकाइदा संक्रमण बढेको हुन सक्ने बताउँछन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठकले स्वास्थ्य संवेदनशीलतामा सरकार सजक नभएकाले फ्रन्टलाइनरमा संक्रमण बढेको बताए। ‘पीपीइको प्रयाप्तता भएन । भएका पीपीइ लगाउने प्रशिक्षण पनि सरकारले दिएन, फेस शिल्ड र मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा पनि उनीहरु प्रशिक्षित भएनन,’ उनले भने, ‘सावधानीका लागि अपनाइने स्वास्थ्य सामाग्री प्रयाप्त उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले अत्यावश्यक सेवामा खटिनेको संवेदनशीलता नबुझ्दा समस्या देखिएको छ ।’
स्वास्थयकर्मीले पनि संक्रमणको आशंकामा आउनेलाई उपचारको प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि सचेतता नअपनाउदा एकबाट अर्कोलाई सारेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘एउटा स्वास्थयकर्मीले संक्रमणको आशंकमा आउनेसँग सामान्य व्यवहार गर्छ । संक्रमण देखिएपछि मात्रै सचेतता अपनाउँछ । त्यसले संक्रमण देदिएको पुष्टि नहुँदै उसलाई सरिसेकेको हुन्छ, आफूलाई सरेको थाहा नपाएर अर्को साथीलाई पनि सारेको हुन सक्छ,’ उनले भने। स्वास्थ्यकर्मीको पीसीआर परीक्षण सुरु देखिनै गर्ने र विरामीको चाप धेरै भएका स्थानमा पुनः एक सातामा फेरी परीक्षण गर्ने गरेका केही कम हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का जनस्वास्थ्यबिद डा. शरद वन्तले फ्रन्टलाइनरलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध नगराइदा र उनीहरुले पनि आम नागरिकसँग नचाहेर पनि नजिक पुग्नुपर्दा संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने बताए । संक्रमणको पुष्टि नहुँदासम्म सामान्य नागरिकलाई जस्तै व्यवहार गर्दा पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयाका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले भने बच्नका लागि सबैभन्दा बढि फ्रन्टलाइनर आफैले सजगता अपनाउनु पर्ने बताउँछन् । सामान्य नागरिक जसलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छैन, त्यससँग पनि सचेत भएर व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य सामाग्री प्रयाप्त नभएकाले संक्रमण बढेको भन्ने विषयको प्रश्नमा प्रवक्ता डा. गौतमले भने, ‘अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको सुरु सुरुमा जोहो गर्न ढिलाई हुँदा कमि भएको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।’ उनले मन्त्रालय र सम्वन्धित स्थानबाट अत्यावस्यक स्वाथ्य सामाग्रीमा कुनै कमि नगराइएको बताए ।
अघिल्लोआवश्यकता हेरि पुनः लकडाउन जारी गर्न विज्ञहरुको सरकारलाई सुझाव
पछिल्लोजम्मु र काश्मीर समेटेर पाकिस्तानले जारी गर्‍यो नयाँ राजनीतिक नक्सा